Krishna Kusum Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Krishna Kusum
कथा : डिभोर्स
~कृष्ण कुसुम~ ‘नमस्कार !’ एकाएक नमस्कारको आवाजले झस्कायो र हेरें । अगाडि दुबै हात जोडेकै स्थितिमा मूर्तिवत् खडा थिई ऊ । बाहिरको मौसमजस्तै अँध्यारो चिर्न सोधें ‘बस किन आयौ एकाबिहानै ?’ उसले भनी, ‘एउटा लडाईँ लड्नुप-यो । कस्तो लडाइँ ? … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : मुद्दा
~कृष्ण कुसुम~ आकाश डम्म थियो । माघेसंघ्राँतीको एकदिन अघि हुँदो हो सायद । खास जाडोको त्यति अनुभव त भएकै छैन यसपटकको हिउँदमा । तैपनि बिहान बेलुका अति चिसो तर दिउँसो भने चैत झैं भैसकेको थियो काठमाण्डौको मौषम । बढ्दो जलवायु … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
~कृष्ण कुसुम~ अहँ मैले आफूलाईभन्दा बढी माया गर्ने मान्छेले मागेको उपहार दिन सकिनँ उसको जन्मदिनमा ! खै ! कहिलेबाट लुकाएछु आफ्नो हृदयमा सौरभलाई आफैँलाई पनि पत्तो नहुने गरी । त्यो नर्सिङ क्याम्पसको होस्टेलको वातावरण बिल्कुलै फरक थियो । १८-२० उमेरका … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →